Ukonakala isenzo womuntu okubi okuyinto aqondiswe ngokumelene "izisulu". Akubalulekile yimuphi isiko okumelwe kwenziwe. Ngokuvamile umuntu enza ngokwezithembiso omunye esebenzisa isiphakamiso. Abantu abakholelwa iziphonso futhi abangavikelekile kakhulu. Kulokhu, ukuletha neso elibi umuntu ngokwakhe, endlini yakhe, isilwane, imoto, umkhaya uba lula kakhulu. Umonakalo ngokuvamile wadala ukuncibilikisa lo mbhangqwana umndeni waqala ukusebenzisa izidakamizwa, utshwala, isisulu waya ukuphelelwa yimali.
Abantu abaningi baba nesithakazelo: wazi kanjani ukuthi kukhona umonakalo kimi? Okokuqala, cabanga ngokucophelela ezandleni zakho. Umuntu amandla eqinile has imigqa ezintathu ezihlukene: ukuphila, ingqondo nenhliziyo. Uma ezimbili zokugcina zazo kweqa omunye, into entendeni umnikazi kalula ulethe umonakalo. Lokhu futhi kufakazelwa ukuba khona inani elikhulu iziphambano. Ngaphezu kwalokho, izimpawu phezu kwezintende zezandla ucacisa umonakalo, okuyinto Kwadlula bathola "ifa" itholakala ngokugxilisa ukuphila esikhathini esidlule. Ukuba khona amavukuzi ukhuluma iso sina okubi.
Ngazi kanjani ukuthi kukhona umonakalo kimi ngendlela elula? Thatha ingilazi yamanzi futhi iqanda eluhlaza. Zibeke ku phezulu ingilazi, aphule iqanda emanzini. Khona-ke sibheke umphumela. Uma isikhuphasha buthule walala phezu phansi ingilazi, futhi amanzi uhlala ahlanzekile, umonakalo ungaphenduki. Esimeni enkulu yesehlukaniso e ingilazi, amabhola esiliva - cishe, aura yakho iba buhlungu.
Ngazi kanjani ukuthi kukhona umonakalo kuwe, ngosizo okufanayo? Thatha ingilazi yamanzi ahlanzekile, cwilisa imizuzu embalwa. Ngakho uphase amandla ketshezi. Ukuze uthuthukise ungakwazi ukwengeza ingcosana usawoti umphumela. Manje, wokhela umentshisi, linda kuze kube yilapho cishe zishe, futhi ngomzuzu wokugcina akuphonse amanzi. Bukela "ukuziphatha" we ilahle. Uma waminza ke une umonakalo. Imeshi wahlala ntanta - akusiyo.
Ngazi kanjani ukuthi kukhona umonakalo kimi ngekhandlela? Thatha ikhandlela, ukukhanyisa ke. Shayela ke emhlabeni umzimba womuntu. Uma ikhandlela iqala ukuba ngibheme futhi ukwambula - kungcono sokuthi kuncike unxenxwa umonakalo. Kodwa ekuqhubeni lolu hlolo, sicela uqaphele ukuthi ikhandlela ungasabela ngendlela hhayi mncane umzimba womuntu, futhi amandla egumbini. Ngakho-ke, ngezinga elithile lapho wenza ukuxilongwa kuyinto efiselekayo ukusebenzisa iziza ezahlukene futhi ethandaza.
Ngazi kanjani ukuthi kukhona umonakalo kimi, ngosizo igolide? Lokhu ensimbini eyigugu kuyadingeka ukuze kuthathe ngaphezu 585. Lapho usebenzisa i-ongaphakeme-grade zegolide, le ndlela kuyinto ayizwakali. Uma ubamba indandatho yegolide esihlathini noma uhlangothi, uma ukulimala komunye umuntu, izohlala emamaki amnyama noma mpunga esikhumbeni. Ungayisebenzisi le okuhlangenwe nakho ubucwebe igolide, njengoba ngokuvamile amalungu ayo kunezelwa ukungcola ahlukahlukene.
Ngazi kanjani ukuthi mina kulimaze noma neso elibi? Ngaphambi Ubhapathizo noma Christmas uthele nanoma isiphi iziwasho. Vumela ke ukuma ngosuku. Ngaphambi kokulala ukugeza nale amanzi. Uma une umonakalo, dream of nguye owaletha ke. Ngeke ngiyathokoza ezinhluphekweni yakho nokuhluleka.
Ukuze uthole ukuthi uma kukhona umonakalo, hhayi ngempela ukuqhuba manipulations ahlukahlukene kuyinkimbinkimbi. Lalela umzimba wakho siqu. Une umonakalo, uma uvame:
- ngibazonda ukuvala;
- uhlushwa izinyo noma ikhanda;
- acasuke futhi ethukile phezu kweze;
- isaziso kwemizwelo;
- baqala ukwesaba singakutholi ukukhanya kwelanga.
Mayelana neso elibi kungenzeka ukuthi lapho umuntu eqala agule njalo. Ngenxa spoilage aura punctured, kunciphisa kakhulu ukumelana nezifo. Qaphela - uma uke kuqala njalo ukhubeke, uthole ezihlukahlukene ukulimala, mhlawumbe ngenxa neso elibi. Lapho uhamba umonakalo umuntu angase azizwe ephelelwa amandla, udidekile uhlale kokucindezeleka njalo. Uma ngokungazelelwe uvele noma yiziphi izimpawu ngenhla, xhumana uchwepheshe ukususa neso elibi.
Izimpawu Magic nezimpawu netinchazelo tawo. Abona yonke into ayakubona iso, uhlamvu lwemali Chinese injabulo, umlingo pentacle kaSolomoni
Qamba Daria? Inani amantombazane umthelela isiphetho
Umaski wokuhlukaniswa uphela ekhaya. Simple, fast, ephumelelayo
Digoxin - yokusetshenziswa
Yimuphi i-mannequin yezinwele zezinwele ezingcono: zemvelo noma yokufakelwa?
Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa periodontitis
Angikwazi ukuya ethoyilethi endaweni ngaphezulu - kuyini?
Indlela vimbela ukuhlangana Naphansi endlini okhuni ngezansi wedwa?
Onesimo Amakamelo okulala: Kuhlomisela egumbini ukulala kahle
3D yekwentiwa: 3d izibuko ungcono?
Pleonasm: izibonelo kanye nezici
Umlingisikazi Nosova uTamara Makarovna: Biography, ukuphila siqu, umsuka, imbangela yokufa isithombe
Osteoarthritis ka kwedolo